China Zmte Yakaputirwa dhisikaini hydraulic hose Kugadzira uye Fekitori | Topa
Zmte Yakaputirwa dhisikaini hydraulic hose
Muenzaniso Nha .: R15
Zvinhu: Silicone Rubber, PP
Kugona: Kupisa-kuomarara Rubber Hose
Ruvara: Dema, Dema / tsvuku / bhuruu / yero
Kupisa: -30 Kusvika 90 Degree
Kureba: 2m / 50m Kana Zvinoenderana Nezvaunoda
Model Nhamba: Dhayamita Yakasiyana
Inzwi Hose: 8-10 Mm Rokunze dhayamita
Inner Tube: Mafuta Anoramba
Usage: Dzivirira Hose
Chitupa: ISO9001: 2008
Zita: Discount Hydraulic Hose
Kubudirira: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Kupa Mazano: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Chitupa: Hydraulic Hose ISO
Zmte Yakaputirwa mutengo Hydraulic Hose
Discount hydraulic hose anonyanya kushandiswa mumugodhi hydraulic rutsigiro, kutsvagisa mafuta, inokodzera mainjiniya kuvaka, crane kutakura, kugadzira simbi, zvigadzirwa zvemigodhi, ngarava, jekiseni kuumba michina, michina yekurima akasiyana maturu emuchina.
Discount hydraulic hosipaipi - Yemukati hosipaipi
Substratum yeyakagadzirwa rabha inopesana nemafuta.
Discount hydraulic hosipaipi - Kusimbisa
1 muroora wesimbi inodzivirira simbi, 2braide uye zvakare ane mana-akasimba. Six waya yekusimbisa
Discount hydraulic hosipaipi - Kuvhara
Nhema yekugadzira rabha inopesana neabrasion, maoiri, mafuta, ozone, mumhepo vamiririri.
kubva -40 ° C kusvika + 100 ° C
Chitupa ID Hose OD Kushanda Kushanda Kumhanyisa Pressure Minimum Bend Radius Kurema
inch mm mm Mpa Psi Mpa Psi mm makirogiramu / m
Discount hydraulic hosipaipi kushandiswa kuendesa iyo hydraulic mvura yakadaro hydraulic mafuta, mafuta emafuta, lubricating, mvura emulsion, hydrocarbon uye mwanakomana kuvhenekera kutakura yakakwira yekumanikidza mvura uye hydraulic inoshandura yeinjiniya chirongwa icho tembiricha iri -40 ℃ ~ + 100 ℃.
Kambani yedu ine michina yemhando yepamusoro iyo yakatumirwa kubva kuSouth Korea, Finland neItari, kusanganisira iyo muchina wekusimbisa, muchina wekuruka, muchina wekumusoro uye zvimwe zvigadzirwa zvekugadzira zvakanyanya. Zvakare pamwe neiyo bvunzo yekumira, yekumhanyisa bvunzo yekumira uye zvimwe zvemberi zvekuyedza michina.
Isu tinogadzira zvigadzirwa zvinosangana neSAE uye DIN zviyero zvepasirese zvine mhando yepamusoro. Zvigadzirwa zvakatengeswa kuminda yakasiyana siyana inosanganisira nzvimbo dzemafuta, maindasitiri emigodhi, simbi, mainjiniya, uye michina. Zvikamu zvakatumirwa kuAmerica, Russia, Canada, Argentina nedzimwe nyika zhinji.
Pasuru & Kutumira
Iyo yakazara package ye discount hydraulic hosipaipiipurasitiki kana bhegi rakarukwa rine nhovo pasi pembiru, iyo inogona kuonekwa pazasi. Isu, zvakadaro, tinogona zvakare kupa yakakosha mapakeji zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Yedu discount hydraulic hosipaipi anobudiswa zvinyatsoenderana National mureza.
1.Using yemhando yepamusoro rabha, yemukati liner ine yakanaka mweya kusagadzikana, uye chifukidziro chine kupisa kukuru kusagadzikana uye kupokana-kuchembera kuita.
2.Reinforcement dura inogadzirwa kubva kuruka (kana kupetera) polyester tambo iri ine yakakwira-simba.
Tembiricha yekushanda: -40 ℃ -160 ℃
4.Executed Yakajairwa: GB / T25
Iyo inzvimbo, hapana kusvibiswa kune zvakatipoteredza.
6.Have wega Technology Dept,
7. bvuma OEM
8.Sample uye kuyedza kurongeka zviripo
1. OEM iripo here?
Hongu, OEM inowanikwa. Tine nyanzvi yekugadzira kubatsira yako brand kusimudzira.
2. Muenzaniso uripo here?
Ehe, sampuli dziripo kuti iwe uedze iyo mhando.Kana isu tine masampula mudura, mitoro inogona kubhadharwa parutivi rwako.
3. Uri Mugadziri here?
100% mugadziri, Gamuchira iwe unoshanyira yedu yekugadzira mutsara.
4. Ndeipi yako yenguva yekubhadhara nguva yemirairo?
T / T 30% sezvo dhipoziti, uye T / T 70% pachiyero akabhadhara pamberi vachizvitakudza.
Kana chero nguva yekubhadhara yekukurukura.
Nzira Yokubata Nesu?
Kutsvaga yakanaka Discount Hydraulic Hose Mugadziri & mutengesi? Tine sarudzo yakakura pamitengo mikuru yekukubatsira iwe kugadzira zvigadzirwa. Yese Zmte Discount Hydraulic Hose iri mhando yakasimbiswa. Isu tiri China Yekutanga Fekitori Yakaputirwa Discount Hydraulic Hose. Kana iwe uine chero mubvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Zvigadzirwa Zvikamu: Hydraulic Hose
Hydraulic maindasitiri parker hosi adapter yekubatanidza
Rabha inoshanduka pombi parker hydraulic hose uye ...
Fuel mutsetse yakanyanya kumanikidza rabha hydraulic hose p ...
Stainless simbi inochinjika yakakwira kumanikidza hydrauli ...
Yakakwira Tembiricha Smooth Surface yerabha hosi
Yakakwira kumanikidza inochinjika rabha hydraulic hosipaipi pombi